ကျန်းမာ‌ရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ဖို့ Philips Steamer ရှိတယ်နော်။ ~ The ICT.com.mm Blog
ကျန်းမာ‌ရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ဖို့ Philips Steamer ရှိတယ်နော်။
မုန့်မျိုးစုံပဲပေါင်းစားမလား? ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသားတွေပဲပေါင်းမလား? ကျန်းမာ‌ရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ဖို့ Steamer ကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးရှာနေရင်တော့ ICT.com.mm မှာ Philips Steamer ရှိတယ်နော်။
ခု ICT.com.mm မှာ Year-End Sales ရှိတာဖြစ်လို့ Philips Steamer ကို သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်နိုင်ပြီနော်။ ပရိုမိုးရှင်းက ဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲမို့ ခုပဲ ဒီအောက်ကလင့်ခ်ထဲမှာ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
Shop here: http://bit.ly/38FAIRf
Newer Gaming Monitor ကောင်းကောင်းရှာနေသူတွေအတွက် 144Hz နဲ့ 1ms ရတဲ့ Gaming Monitor
Older Toner cartridges ကို အသုံးပြုထားပြီး ပုံနှိပ်ရာမှာ အရမ်းမြန်တဲ့ အရည်အသွေးကောင်း Laser printer တွေရှာနေရင် ICT.com.mm ကိုမမေ့နဲ့နော်။